रक्सी पिउनुहुन्छ? यी रोगको जोखिममा पर्नुहोला - Unity Khabar
रक्सी पिउनुहुन्छ? यी रोगको जोखिममा पर्नुहोला
✍️ खबर संवाददाता	 प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १३:५१
डडेल्धुरा: अत्याधिक जाड रक्सी खाने बानिले मानिस पूर्णतया रक्सिको अधिनमा हुन्छ । अत्याधिक मदिराको आदतलाई तत्काल छोड्दा पनि मानिसमा त्यसको प्रभाव लामो समय रहन्छ। रक्सीले बिचार, निन्द्रा , भावाना सामाजिक ब्यवहार , यौन सबैमा असर पर्छ ।